Global Voices teny Malagasy » Miditra Amin’Ilay Korontana Ao Tiorkia i Rosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Miditra Amin'Ilay Korontana Ao Tiorkia i Rosia
Voadika ny 27 Jona 2013 4:45 GMT 1	 · Mpanoratra Daniel Alan Kennedy Nandika nirinandrea
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Tiorkia, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Tontolo_iainana, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Raha toa ny ao Istambul ka mbola mitohy ny hozongozonin'ny korontana faobe  [en] manohitra ny Praiministra Recep Tayyip Erdoğan, dia manaraka akaiky ny fizotrany sy miresaka ny raharaha ny RuNet. Ho an'ny Rosiana dia i Torkia no toerana be mpifidy indrindra amin'ny fotoam-pialan-tsasatra, izay voasariky ny moron-dranomasiny, ny tsy fahalavirany, ny hamoran'ny sarany sy ny fisian'ny fifanarahana ahazoana Visa malalaka nifanaovany tamin'i Rosia. Tamin'ny taon-dasa fotsiny, teo amin'ny 3 tapitrisa teo ireo Rosiana afaka nitsidika an'i Torkia. Raha toa ny fahalinana amin'ny zava-mitranga ankehitriny any an-toerana mety ho hovoamariky ny ahiahy ho an'ireo dia fivahinianana tsy ankamerim-bola, na i Rosia izy tenany aza tsy vahiny mihitsy amin'ny fidinàna an-dalàmbe tao anatin'izay roa taona izay. Maro ireo Rosiana no haingana tamin'ny fampitahàna : teo amin'ireo hetsi-panoherana roa sy tamin'ireo mpitondra politika roa.
Hatramin'ny voalohany, ny ankamaroan'ny fitseran'ireo Rosiana no nirona nankany amin'ireo mpanao hetsi-panoherana, toe-javatra iray izay atsipin'ilay  mpanoratra mahabe resaka sy Lehiben'ny vondronn'ny mpanohitra “Other Russia”, Eduard Limonov [ru] ho vokatry ny toetra nationalin'ny Rosiana :
Izahay mponina eto Rosia dia manantena foana fa ireo izay mitsangana hanohitra ny governemantany dia handresy, mirona fotsiny amin'izao ho amin'ny lafy misy azy ireo. Tsotra ny fanazavana izany. Satria halànay ny governemanta ary ireo izay rehetra mibaiko eto amin'ny firenenay ka takianay ny fialàn'izy ireo, faran'izay haingana, ary dia mandeha ho azy ny fanehoanay firaisankina amin'izay rehetra ady atao amin'ny Fanjakana.
“Korontana ao Istanbul”, 11 Jona 2013, Sary avy amin'i Eser Karadağ  CC2.0
Ary dia nanohy nanazava i Limonov,fa tsy zavatra mandeha ho azy ny fiaraha-mizaka ao Torkia. Nilaza ny andraikitra tànan'ny Tontolo manodidina amin'ny fanapariahana ilay hetsi-panoheran'ny Taksim, Limonov nanoratra hoe “Toa tena mitovy amintsika ry zareo Tiorka, toa an'i Chirikova sy ny Alany Khimki  [en].
Tsy irery i Limonov, satria marobe ireo Rosiana niditra tao amin'ny Twitter sy LiveJournal haneho ny fanohanany ilay hetsi-panoherana. Arkady Babchenko, Rosiana iray mpanao gazety izay nibilaogy avy eny an-kianja mikasika ilay hetsi-panoherana ao Istanbul, dia tena nanakiana mafy [ru] ilay valintenin'i Erdoğan (avy eo izy voasambotra, voavono  [ru] ary noroahana hiala an'i Torkia [en].)
Raha ny momba ireo mpanao fifampiraharahana (omaly [12 Jona 2013] iraikambin'ny folo ireo olona nandeha tany Erdoğan hanao fifampiraharahana, araka ny fahafantarako azy, tsy nahavita nanao fifanarahana na dia iray akory aza izy ireo, nefa tsy mazava izany) — tsy momba ny fisaritahana sy tsy filaminana loatra [ izay zareo no fototra ], fa dia efa nanomboka niresaka izany ny olona. Hetsiky ny manam-pahaizana manokana ho an'ny andaniny ao Erdoğan. Zarazarao hanjakàna. Marani-tsaina. I Putin no nampianatra azy.
Maro ny fampitahàna an'i Erdoğan tamin'i Putin, indrindra tao amin'ny twitter. Real_Estate_Mos  [ru] nandefa bitsika hoe :
Erdoğan dia karazàna Putin Tiorka
Tamin'ny alalan'ny fanambaràn'ireo mpitondra roa izay milaza ny tenany ho mpanompon'ny vahoaka ireo, sergeiolevskii  [ru] nibitsika hoe :
Erdoğan – “mpanompon'ny vahoaka aho”
Putin- “Miasa toy ireny andevo eny an-tsambo ireny aho”
Nahoana no sarotra ny manàla ireo mpanompo sy andevo ireo ?
Ireo Rosiana manohana an'i Putin dia nisalasala hilaza ny fanohanany an'i Erdoğan, izay teo ambain'ny fitantanany no namparikivy ny fifandraisana eo amin'ny Rosiana-Tiorka, indrindra mikasika ilay resaka Syria. Na dia izany aza, i Nikolai Starikov, mpikambana ao amin'ilay vondrona matanjaka manohana an'i Putin, mpanoratra, ary mpandalina ny resaka tsikombakomba dia nanambara [ru] fa nitsabahan'ny Amerikana iny hetsika iny mba hahatonga fikorontanana ao Torkia sy hanerena ny governemanta hanohana ireo mpiady avy amin'ny mpanohitra ao Syria, izay ambaran'i Starikov fa nezahany nosorohana :
Tsy te [ho voarirodrirotra] i [Torkia] ka dia mila terena. Ary izao dia azonareo izy ity: eny an-dalambe izao “Ny Lohantaona Tiorka”. Fitroarana miharo famonoana, fifandonana tamin'ny polisy, fikasana ny haka an-keriny ny biraon'ny antoko mitondra. Ary ny planina rehetra nikasàna ny hamotika kianja tokana, araky ny voalazan'ny filazam-baovao ? Hagaigena tanteraka. Ny hanery an'i Torkia hanao sonia amin'ilay adin'i Syriana ary hanampy ireo Islamista no tena tanjon'ireny fanakorontanana ireny
Taloha i Starikov dia matetika no nilaza fa ny Departemantam-panjakana Amerikana no ao ambadiky ny hetsiky ny fanoherana ao Rosia, ho fitaovana mavitrika hamparefo ny firenena.
Ilay mpampiasa twitter aliciamillor  [ru] dia nilaza ny heviny mikasika ireo andianà bitsika  [ru] hita hatramin'izay nilazan'i Erdoğan tao an-kianja fa hanao fitsapan-kevibahoaka izy, tsara lavitra noho ireo politisiana tandrefana izy :
Arahabaina! nanolotra hevitra ny amin'ny tokony hanaovana fitsapan-kevi-bahoaka i Erdoğan. Nanao toy izany koa ny Frantsay tamin'ilay fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy iny. Nolavin'i Hollande [Filoha Frantsay] fatratra izany, niaraka taminà alika sy baomba [mandatsa-dranomaso] mirarakompana. Noho izany, demokraty lavitra mihoatra noho i Hollande izany i Erdoğan.
Vondrona iray miteny Rosiana, izay fantatra fa nanohana an'i Erdoğan, ahitàna mponina avy ao amin'ny repoblikan'i Asia afovoany, ny ankamaroan'izy ireo dia Tiorka avokoa, ny fomba fiaina sy fomba fiteny mifandray amin'ny Tiorka “Anatolia”. Mpampiasa iray  [ru, uz] ao Uzbekistan (izay famoloana  [en] olona an-jatony maro no namalian'ny filohany ny hetsi-panoherana natao ny taona 2005) dia nidoka an'i Erdoğan  [ru] tamin'ilay fifehezantena sy fahatoniana nasehony :
Nety ny nataon'i Erdoğan, efa nampitandrina [ireo mpanao hetsi-panoherana] izy, tsy taitra anefa izy ireo, ary izao lasa nitsoaka ireo!!! ny tena marina, tsy tokony nampitandrina azy ireo akory izy
Mpampiasa hafa iray, Eva_Alli  [ru, kg] avy ao Kyrgyzstan, izay feno korontana ihany koa ao amin'ny governemantany, dia nandoka [ru] ny fihenjanan'i Erdoğan.
Tena lehilahy mahafinaritra i Erdoğan. Raha mba manana olona toa azy mantsy isika. Fantany izay ataony, araky ny fomba fijeriny manokana ary tsy misy tsy hainy. Toy ny Liona raha atao teny iray.
Leonine Erdogan dia hafa fa tsy kanosa velively, araky ny hevitr'ireo sasany amin'ny mpampiasa RuNet. Sary tao amin'ny YouTube. 18 Jona 2013.
Samy mahita iny raharahan'i Tiorkia iny amin'ny amin'ny alàlan'ny olany anatiny avokoa ireo vondrona mpampiasa RuNet : mahita ohatra iray azo arahana tsara ireo mpikambana ao amin'ny antoko mpanohitra, raha toa ka porofon'ny tsy fifehezan'ny vahiny sy ny fihatsaram-belatsihin'ny tandrefana no fahitàn'ireo mpanohana ny fitondrana izany fanakorontanana izany. Mifanohitra amin'izay, ny ao Azia afovoany dia toa mitsiriritra fatratra ny hanana mpitarika toa ireo rahavaviny Anatoliana ireo, mba hanana mpitarika mahafehy sy tony ary mahay manapa-kevitra kokoa raha miohatra amin'ny azy ireo. Ary na dia tsy sarotra ho an'ny firenena lavitra be an-kilometatra maro aza ny mahazo sy manaraka iny vaovao iny amin'ny alalan'ny filazam-baovao sosialy, dia maro no milaza fa raharahan-tokantrano ny olana politika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/27/49448/
 hozongozonin'ny korontana faobe: https://globalvoicesonline.org/2013/06/04/turkey-a-social-media-chronology-of-occupy-gezi/
 Eser Karadağ: http://www.flickr.com/photos/turcain/
 Chirikova sy ny Alany Khimki : http://www.opendemocracy.net/od-russia/yevgenia-chirikova/battle-for-khimki-forest
 tena nanakiana mafy: http://starshinazapasa.livejournal.com/633274.html
 voasambotra, voavono: https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/375868782513361
 ary noroahana hiala an'i Torkia : http://en.ria.ru/russia/20130615/181682813/Detained-Russian-Reporter-Freed-in-Turkey.html
 dia nanambara: http://nstarikov.ru/blog/26477
 mikasika ireo andianà bitsika: http://sfy.co/iMLx
 Mpampiasa iray: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/uunknownn_
 dia nidoka an'i Erdoğan: https://twitter.com/uunknownn_/status/346001220047081472